Redmi Note 8 (6/64GB)
Redmi Note 8သည်Battery mAh4000ဖြင့်လာထားပြီးCameraပိုင်းမှာဆိုရင် main camera 48MPကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ Display ပိုင်းမှာဆိုရင်IPS LCD capacitive touchscreenကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ကိုင်ရတာပေါ့ပေါပါးပါးရှိပြီးScreen side 6.3"ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။Redmi Note 8 ၏ Resolution မှာဆိုရင်1080 x 234 (0rati~409 ppi densoity)လာထားပါသည်။
Redmi Note 8 Pro (6/128GB)
Redmi Note 8 Pro သည် Screen Size အနေနဲ့ 6.53 inch ရှိပြီး Display Type ကတော့ Super LCD ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ RAM 6GB နဲ့ ROM 128GB ရှိပြီး Battery ကတော့ 4500mAh ပါဝင်ပါတယ်။ Main Camera အနေနဲ့ 64MP/8MP/2MP/2MP Camera (၄) လုံး နဲ့ Selfie Camera 20 MP ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ အားဝင်မြန်တဲ့ Fast Charging 18W ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။
Redmi 10X (4/128GB)
Redmi 10X ၏ Resolution အပိုင်းကတော့ 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) ဖြစ်ပြီး Dimensions အနေဖြစ် 162.3 x 77.2 x 8.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.35 in) အဖြစ်လာပေးထားပါတယ်။ Camera ပိုင်းအနေနဲ့ 48MP ကိုလာပေးထားပြီး Selfle camera ပိုင်းအနေနဲ့ 13MPကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Battery ပိုင်းအနေနဲ့ 5020mAh ကိုသုံးပေးထားပြီး Fast charging အနေနဲ့တော့ 18Wကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
ပေါ့ပါးကြော့ရှင်းပြီး Smart ကျတဲ့ Redmi Air Dots2နားကြပ်လေးနဲ့အရာရာကို စီးမျောခံစားကြည့်လိုက်ပါ Redmi Air Dots2လေးကတော့ယခင် Feature တွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။Bluetooth Version ကတော့ 5.0 ပဲ အသုံးပြုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာယခင် AirDots လို တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ချိတ်စရာမလိုတော့ပဲEarbuds တစ်ဖက်တပ်ထားရင် Mono-Mode နဲ့နှစ်ဖက်တပ်ထားရင်တော့ Stereo-Mode ဆိုပြီး ချက်ချင်းပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ဗျဒါတင်မကသေးဘဲ Triple Tap ပြုလုပ်ပြီး Low-latency Game Mode အသစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာBattery ကနေနဲ့ကတော့ (၄) နာရီဆက်တိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးCharging Case နဲ့ တွဲဖက်မယ်ဆိုရင်တော့ (၁၂) နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာIPX4 ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေပက်ဖြန်းမှုဒဏ် ခံနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Mi ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 10000mAh Power Bank ကတော့ Wireless ရတဲ့ Power Bank လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Wireless လဲရ၊ Cable နဲ့ တွဲသုံးလဲ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းလေးကို power bank ပေါ်တင်လိုက်ရုံနဲ့ အားဝင်နေမှာဖြစ်လို့ လူကြီးမင်းတို့ သုံးရ အဆင်ပြေစေမည့် ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Redmi K30 (8/128GB)
Redmi K30 4G တွင် ၆.၆၇ လက်မ touchscreen မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး resolution 1080x2400 pixels နှင့် aspect ratio 20:9ရှိသည်။ ၎င်းသည် octa-core Qualcomm Snapdragon 730G ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းဖုန်းကို 8GB /128GB RAM ဖြင့်ထောက်ပံ့ထားပြီး 64GB / 128GB / 256GB internal storage option များလဲရရှိနိုင်သည်။
Redmi 10X 5G (8/128GB)
Redmi9(4/64GB)
အကုန်အကျလည်း သက်သာပြီး နောက်ဆုံးထွက် Function တွေကို ခံစားလိုတယ်ဆိုရင်တော့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Redmi9လေးကတော့ Display ကို IPS LCD သုံးထားပြီး Display size ကတော့ 6.53 inches ရှိပါတယ်။ OS ကတော့ Android 10, MIUI 12 နဲ့ဖြစ်လို့ နောက်ဆုံးပေါ် MIUI Feature တွေကို ခံစားရရှိနိုင်မှာပါ။ Battery ကတော့ 5020mAh ပါဝင်လို့ တော်တော့ကို အသုံးခံနိုင်မှာပါ။ အားသွင်းကြိုးကတော့ Type-C နဲ့ဖြစ်ပြီး Fast Charging 18W ပါဝင်ပါတယ်။
Mi Air Dots 2
Mi Air Dots2လမ်းလျောက်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အထာကျကျ သီချင်းနားထောင်ချင်သူတွေအတွက် Xiaomi ရဲ့ Mi Air wireless နားကျပ်လေးတွေလာပ​ြီနော်... ပေါ့ပါးပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့အပြင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ Bluetooth 5.0 Chip ပါဝင်လို့ မိမိဖုန်းကတဆင့်ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းတွေရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့သံစဉ်တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဖုန်းလက်ခံတာ သီချင်းကျော်တာ ရပ်တာတွေကိုလည်း touch operation နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်..ပြင်ပအသံတွေကနေ မနှောင့်ယှက်နိုင်အောင်လည်း noise reduction technology ကထိန်းသိမ်းပေးသွားမှာပါ..
Redmi Note9Pro (6/64GB) Official
Redmi Note9Pro ၏ Resolution အပိုင်းကတော့ 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) ဖြစ်ပြီး Dimensions အနေဖြစ် 165.8 x 76.7 x 8.8 mm (6.53 x 3.02 x 0.35 in)အဖြစ်လာပေးထားပါတယ်။ Camera ပိုင်းအနေနဲ့64 MP ကိုလာပေးထားပြီး Selfle camera ပိုင်းအနေနဲ့ 16 MPကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Battery ပိုင်းအနေနဲ့ 5020mAh ကိုသုံးပေးထားပြီး Fast charging အနေနဲ့တော့ 30Wကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
အကုန်အကျလည်း သက်သာပြီး နောက်ဆုံးထွက် Function တွေကို ခံစားလိုတယ်ဆိုရင်တော့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Redmi9လေးကတော့ Display ကို IPS LCD သုံးထားပြီး Display size ကတော့ 6.53 inches ရှိပါတယ်။ OS ကတော့ Android 10, MIUI 12 နဲ့ဖြစ်လို့ နောက်ဆုံးပေါ် MIUI Feature တွေကို ခံစားရရှိနိုင်မှာပါ။ Battery ကတော့ 5020 mAh ပါဝင်လို့ တော်တော့ကို အသုံးခံနိုင်မှာပါ။ အားသွင်းကြိုးကတော့ Type-C နဲ့ဖြစ်ပြီး Fast Charging 18W ပါဝင်ပါတယ်။
အကုန်အကျလည်း သက်သာပြီး နောက်ဆုံးထွက် Function တွေကို ခံစားလိုတယ်ဆိုရင်တော့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Redmi 9A လေးကတော့ Display ကို IPS LCD သုံးထားပြီး Display size ကတော့ 6.53 inches ရှိပါတယ်။ OS ကတော့ Android 10, MIUI 12 နဲ့ဖြစ်လို့ နောက်ဆုံးပေါ် MIUI Feature တွေကို ခံစားရရှိနိုင်မှာပါ။ Battery ကတော့ 5000 mAh ပါဝင်လို့ တော်တော့ကို အသုံးခံနိုင်မှာပါ။ အားသွင်းကြိုးကတော့ Type-C နဲ့ဖြစ်ပြီး Fast Charging 10W ပါဝင်ပါတယ်။
Mi Box 4k Gobal Smart TV Box
Mi Box 4k (Gobal Box) သည် Smart မရသော TV များကို Smart TV ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောကြားခံဖြစ်သည်။ Smart TV ဖြစ်သောကြောင့် Google, Youtube အစရှိသည်တို့ကိုအသုံးပြုနိင်ပြီး Video Play သည့်အခါတွင်လည်း 4k Resolution ဖြစ်၍ ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပုံရိပ်တွေကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါသည်။
Redmi9(3/32GB) Official
Redmi9၏ Resolution အပိုင်းကတော့ 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) ဖြစ်ပြီး Dimensions အနေဖြစ် 163.3 x 77x 9.1 mm (6.43 x 3.03 x 0.36 in)အဖြစ်လာပေးထားပါတယ်။ Camera ပိုင်းအနေနဲ့ 13 MP ကိုလာပေးထားပြီး Selfle camera ပိုင်းအနေနဲ့ 8MPကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Battery ပိုင်းအနေနဲ့ 5020mAh ကိုသုံးပေးထားပြီး Fast charging အနေနဲ့တော့ 18W ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Mi Hi-Res Audio
Mi Hi-Res Audio သည် mi original နားကြပ်ဖြစ်ပါသည်။ သီချင်းနားထောင် ရာတွင် လည်း noise နည်းသောအသံကိုရရှိနိုင်ပြီး စကားပြောရာတွင် ကြည်ကြည်လင်လင်ပြတ်သားသော အသံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး တဖတ်လူကြားရတွင် တိကျပြတ်သားစွာကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Mi7Tablet Key KTV
Mi7Tablet Key KTV ကတော့ Mi7Karaoke Software ကို ထည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ HDD 2TB ပါဝင်ပြီး Dual Core CPU ကို အသုံးပြုပေးထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Mi Hand Washing Machine လေးကတော့ ဆပ်ပြာရည်ဘဲ ထည့်ထည့် Hand Sanitizer ဘဲထည့်ထည့် လက်နဲ့ဖိနေစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဆေးရာမှာလျင်မြန်ချောမွေ့မှုရှိစေတဲ့အပြင် အရေပြားကိုလည်း ထိခိုက်မှုမရှိပဲ bacteria တွေကိုပာ 99.9% ထိသန့်စင်ပေးပါတယ်။ ဆပ်ပြာရည် 320 ml ပါဝင်ပြီး ဆပ်ပြာမြှုပ်အကြိမ် 400 စာထိ သုံးနိုင်တဲ့အပြင် မိသားစု အတွက် ရက် 50 ခန့်အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။ IPX4 ဖြစ်တာ​ကြောင့် ရေစင်ပြီးပျက်မှာပူစရာမလိုတော့ပါဘူး စက်တွင် AA ဓာတ်ခဲ့ပါဝင်ပြီး Power စားသက်သာအောင်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ၉ လခန့်နီးပါး အားခံပါတယ် ခုလို Covid 19 ကာလမှာဆို ဈေးဆိုင်တွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်တွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Mi Piston Air Earphone
Xiaomi မှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Mi Piston Air Earphone လေးကတော့ 45 degree စောင်း ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် နားထဲမှာ အလိုက်သင့်လေးဖြစ်နေမှာပါ။ နားကြပ်ထိပ်ဖျားလေးအားပျော့ပြောင်းသော Sillicon လေးများနှင့်ပြုလုပ်ထားပေးတဲ့အတွက် နားနာမှာကို မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။
Mi 10X Pro 5G (8/128GB)
Xiaomi ရဲ့ Mi 10X Pro 5G ကို Display Type ကိုတော့ AMOLED 6.57 inch ကိုသုံးထားပါတယ်…OS ကတော့ Android 10, MIUI 11 ကိုသုံးထားပါပြီး Network ကိုတော့ 5G အထိရနိုင်ပါတယ်…RAM/ROM အနေနဲ့ 8/128GB နဲ့ထွက်ရှိထားပါတယ်…Main Camera ကတော့ Quad = 48+8+8+5 MP နဲ့ Selfie Camera ကတော့ 20 MP ကိုသုံးထားပါတယ်။Battery ကတော့ 4520 mAh ကိုသုံးထားပြီး Type-C fast charging 33W ပါဝင်ပါတယ်…
Redmi K30 5G (8/128GB)
Redmi K30 5G တွင် 6.67"inch touchscreen မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး resolution 1080x2400 pixels နှင့် aspect ratio 20:9ရှိသည်။ ၎င်းသည် octa-core Qualcomm Snapdragon 730G ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းဖုန်းကို 8GB / 128GB RAM ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
Redmi9(4/64GB) (Official)
Redmi9၏ Resolution အပိုင်းကတော့ 1080 x 2340 pixels ပါဝင်ပါတယ်။ Camera ပိုင်းအနေနဲ့ 13 MP ကိုလာပေးထားပြီး Selfle camera ပိုင်းအနေနဲ့ 8MPကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Battery ပိုင်းအနေနဲ့ 5020mAh ကိုသုံးပေးထားပြီး Fast charging အနေနဲ့တော့ 18W ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Xiaomi Yesoul M1 Smart spinning Bike
“ဝိတ်တက်မှာမကြောက်ပဲ စားချင်သလောက်သာစား Xiaomi ရဲ့ Smart Spinning Bike က သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို Silm body ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးမှာပါ”ကျန်းမာရေးအတွက် အိမ်ထဲမှာပဲ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝိတ်ချဖို့အတွက် Gym သွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အခက်တွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ Xiaomi ကထုတ်တဲ့ Xiaomi Yesoul M1 Smart spinning Bike လေးကို ဝယ်ထားဖို့လိုပြီပေါ့။Tablet တို့ ဖုန်းတို့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ app ကနေတဆင့် လေ့ကျင့်ခန်းညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်း ကြည့်နိုင်တာမို့ Personal trainer တစ်ယောက်ကို ခေါ်ထားသလို မှန်ကန်တဲ့ လေ့ကျင့်နည်းတွေကိုလည်းသိနိုင်မှာပါ။ အဲ့ဒီ app ကနေပဲ ကိုယ့်ရဲ့ သွေးခုန်နှုန်းတွေ အကွာအဝေးတွေနဲ့ speed တွေကိုပါ သိနိုင်ပါတယ်။နေရာလည်းအရမ်းမယူတာမို့ ကိုယ့်အိပ်ယာဘေးနားမှာတင်ထားရင်ကို အခန်းရဲ့အပြင်အဆင်ကို သိသိသာသာမပြောင်းစေပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အသံကလည်းအရမ်းငြိမ်တာမို့ စောစောစီးစီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တက်တဲ့သူတွေအတွက် အိပ်နေတဲ့သူတွေကို မနှိုးမိစေတော့ဘူးပေါ့။လက်ကိုင်နဲ့ ထိုင်ခုံကိုလည်း ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေသလို အတိုးအလျော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ စီးနင်းနိုင်တာပေါ့။ ဒါ့အပြင် Weight တုံး2တုံးနဲ့ အခင်းပါ ပါဝင်သေးတာမို့ တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါ တွဲဖက်ပြီးလုပ်ဖို့ အရမ်းကို အဆင်ပြေစေမှာပါဖြစ်တယ်။
Deerma Mini Dehumidifier လေးကတော့ စိုထိုင်းဆ လျော့ချချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ နေရာသိပ်မကျယ်တဲ့အခန်း၊အဝတ်ဘီရို၊စာအုပ်စင်၊ Camera သိမ်းတဲ့နေရာ တွေ လိုမျိုး စိုထိုင်းဆ များတာ မလိုချင်တဲ့နေရာတွေမှာ အလွယ်တကူ ထားလို့ရတဲ့ Deerma Mini Dehumidifier ဖြစ်ပါတယ်။Deerma Dehumidifier ကိုပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြင့် တည်ဆောက် ထားပါတယ်။ Dehumidifier ထားရှိထားသော နေရာ ပတ်ပတ်လည်ရှိ အစိုဓာတ်အား 360' ပတ်လည် စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။စက်ထဲမှာသိုလှောင်နိုင်တဲ့ ရေပမာဏ ပြည့်နေပြီဆိုရင် အရောင် ဖြင့် ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြည့်သွားရင်လည်း စက် ကို power ပေးလိုက်သည်နှင့် ရေကိုအလိုအလျောက် ပြန်လည်ဖယ်ရှားပြီး ထပ်မံအသုံးဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်သွားပါမှာပါ။အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှု့အနေဖြင့် ၂ ပတ် ကနေ ၃ ပတ် အကြား လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရေပမာဏ ပြည့်သွားပါ ၁၂ နာရီ အတွင်း စက်ထဲမှ ရေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်အသုံးပြုနေချိန်တွင် ပါဝါ ပေးထားရန်မလိုအပ်ပါ။Deerma Mini Dehumidifier အား ဧရိယာအကျယ် 5m2 အထိ ရှိသော နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းများကို နောက်ထပ် Mi product ဖြစ်တဲ့ Mi wireless charger လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို charger မျိုးလဲဆိုတော့ လူကြီးမင်းများရဲ့ phone ကို ထို wireless charger ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ auto battery သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Wireless charger ပါတဲ့ ဘယ် phone အမျိုးအစားမရွေးသုံးလို့ရပါတယ်။Fast Wireless charging ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးမင်းများသုံးစွဲရအဆင်ပြေပါတယ်။ Metallic body ဖြစ်တဲ့တွက်ကြောင့် အမာခံပါတယ်။ Watt အနေနဲ့ကတော့ 10watt ဖြစ်ပါတယ်
Mi Earphone (Ori)
Mi Earphone (Ori) လေးကတော့ အရည်သွေးမြင့်ဆီလီကွန်ကအသုံးပြုထားပြီးတော့ အလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ Bass အသံကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Mic နှင့် play / pause ခလုတ်ပါတာကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mi Portable BT Speaker
သီချင်းနားထောင်ရတာကို အရမ်းနှစ်သက်တဲ့သူတွေရှိကြလား။ကဲ…ဒီလိုဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ် Friday မှာ သံစဉ်တွေနဲ့ အတူတူမျောလွင့် လိုက်ရအောင်။တချိန်က နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များခဲ့ mi portable bluetooth speaker လေး ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ အရည် အသွေးနဲ့ အသံထွက်ကတော့ လူတိုင်းကြိုက်ခဲ့တာမို့ အများကြီး ပြောပြစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်ဗျ။အရွယ်အစားကလည်းတအားမကြီးဘူးဆိုတော့ ဘယ်သွားသွားသယ်ရတာလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်....
Mi Soap လေးကတော့ ခုလို Covid 19 ကာလမှာဆို ဈေးဆိုင်တွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်တွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ကိုလည်း အမြဲသန့်စင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်....ဒါကြောင့် Mi Soap လေးကိုအခုပဲ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
Mi 10 Ultra 5G (16/512GB)
ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်း သစ်လွင်တယ့် ပုံစံနဲ့ လာပေးထားတဲ့ Mi 10 Ultra ရဲ့ Display ပိုင်းကတော့ OLED display သုံးထားပြီးတော့ Resolution ကလည်း 1080x2340ရှိတာမလို့ရုပ်ထွက်ကတော့လန်ပြန်နေမှာအသေချာပါပဲ၊၊OS ကိုလည်းAndroid10ကိုမှနောက်ဆုံးထွက်တဲ့MIUI12ကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်လို့Latest functionတွေကိုခံစားရရှိနိုင်မှာပါ၊၊Processorပိုင်းကိုလည်းSnapdragon865ကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်လို့မနိုင်တဲ့ဂိမ်းဆိုတာတော့မရှိသလောက်ပါပဲ။သူရဲ့ main camera ကတော့ quad ဖြစ်ပြီး 48+48+12+20 MP နဲ့ Selfie camera ကတော့ 20 MPကိုသုံးပေးထားပါတယ်။Batteryကတော့4500mAhပါဝင်ပါတယ်။First charging 120Wအထိတောင်ပါဝင်တာဖြစ်ပြီး23မိနစ်မှာ100%အထိရနိုင်ပါ။ပေးရတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့လည်းတန်သလိုဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်းပြောစရာမလိုအောင်မိုက်နေတာမလို့အခုဘဲလာဝယ်လိုက်ကြစို့နော်…..
Mi Power Bank320000mAh 50W Max Power Bank
မိုးတွင်းဆိုတော့ အိမ်မှာ မီးခနခနပြတ်လို့ ဖုန်းအား‌လုံလုံလောက်လောက်မရလို့ စိတ်ညစ်နေလားဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်း အတွက် ပါဝါအားပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့ Mi Power Bank320000mAh လေးကို ဆောင်ထားဖို့အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။ 50 W out put ထုတ်ပေးတာဆိုတော့ ဖုန်းတင်မဟုတ်ဘဲ Laptop တွေအတွက် ပါအဆင်ပြေတဲ့ power bankလေးပါ။
Black Shark BPB01 10000mAh Power Bank
Gameဆော့လို့ အရှိန်ကောင်းနေချိန်မှာ ဖုန်းအားကုန်လို့ စိတ်ပျက်နေပြီလား ဒါဆိုရင်တော့ Gamer ညီကိုတွေအတွက် Power Bank တစ်ခုလောက်တော့ဆောင်ထားဖို့လိုနေပြီနော်.....Power Bank ဆိုရင်တော့ Xiaomi ကထုတ်ထားတဲ့ Black shark Power Bank ရှိနေပြီလေ..... Black shark ၊ Xiaomi ၊ Redmi ၊ Poco စတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ပေးထားပေမဲ့ မည်သည့်ဖုန်းမျိုးအစားနဲ့မဆိုချိတ်ဆက်ပြီးလဲသုံးလို့ရပါတယ်.....Power Bank ကတော့ 10000mAh ရှိပြီး 18W fast charger ရလို့ မိနစ်၃၀ အတွင်းမှာ 47% အထိအမြန်အားသွင်းလို့ရတယ်နော်.....ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုကြည့်ပြန်တော့လဲ စက်ရုပ်ခေါင်းနဲ့ Gaming သမားတွေလုံးဝအကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့ Gaming Power Bank လို့တောင်ပြောကုန်ကြပြီဗျာ.....Power Bank တွေပေါပေမဲ့ ကိုကာတော့ Black Shark ကိုအကြိုက်တွေ့နေမှတော့ သူလေးကိုပဲရွေးချယ်အသုံးပြုတော့မယ်ဗျာ.....
Mi USB 60W 6-Port CDQ06ZM Charger
သင့် Electronic Device တွေကို စိတ်ချလက်ချနဲ့ အားသွင်းနိုင်ဖို့ Charger ကိုရှာဖွေနေပါသလား? သင့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ Electronic Device တွေကို အားသွင်းဖို့ Charger တွေအများကြီးမလိုတော့ပါဘူး... Mi USB 60W 6-Port CDQ06ZM chargerတစ်ခုရှိရုံနဲ့ ပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ်။ Device (၆)ခု တစ်ပြိုင်တည်းအားသွင်းနိုင်တော့ မီးပလပ်ပေါက်အတွက် နေရာအများကြီးမလိုတော့ပါဘူး။Original Charger မရှိလဲ ပူစရာမလိုဘဲ စိတ်ချလက်ချအားသွင်းလို့ရပါတယ်။ အားသွင်းနှုန်းမြန်ဆန်သလို safe လဲဖြစ်၊ Device (၆)မျိုးကိုလည်း Charging သွင်းနိုင်တဲ့ Mi USB 60W 6-Port CDQ06ZM Charger သာ ဆောင်ထားလိုက်ပါ...လူကြီးမင်းတို့အတွက် အမှန်တကယ်အသုံးတည့်မယ့် ပစ္စည်းကောင်းလေးဆိုတာ အာမခံပါတယ်ဗျာ။
Mi TDS(water testing pen)
Mi TDS(water testing pen) လေးကတော့ ရေ၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သန့်စင်ရန်လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းဆုံးဖြတ်သည်။ Mi TDS Pen သည်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ဓာတ်ပြုပြီးနီကယ်၊ ခရိုမီယမ်စသည်တို့နှင့်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။ ဘောပင်သည် IPX6 ရေစိုခံနိုင်ပြီးတိုင်းတာရာတွင်အလိုအလျှောက်အပူချိန်ညှိခြင်းနှင့်အတိကျဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mi2Pin Charger 27W
သင့် Electronic Device တွေကို စိတ်ချလက်ချနဲ့ အားသွင်းနိုင်ဖို့ Charger ကိုရှာဖွေနေပါသလား? သင့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ Electronic Device တွေကို အားသွင်းဖို့ Charger တွေအများကြီးမလိုတော့ပါဘူး.Mi2Pin Charger တစ်ခုရှိရုံနဲ့ ပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ်။ Original Charger ဆိုတော့စိတ် ပူစရာမလိုဘဲ စိတ်ချလက်ချအားသွင်းလို့ရပါတယ်။ အားသွင်းနှုန်းမြန်ဆန်သလို safe လဲဖြစ်တဲ့ Mi Mi2Pin Charger သာ ဆောင်ထားလိုက်ပါ...လူကြီးမင်းတို့အတွက် အမှန်တကယ်အသုံးတည့်မယ့် ပစ္စည်းကောင်းလေးဆိုတာ အာမခံပါတယ်ဗျာ။
Mi Selfie Bluetooth Stick
Mi Selfie Bluetooth Stick လေးနဲ့ မမတို့ ညလေးတို့အတွက် အကြိုက်ကိုဓာတ်ဖမ်းမယ် တ `ချပ်´ `ချပ်´ နဲ့ နေရာစုံမှာ တက်ကနောင် `ချပ်´ကြမယ်။အမြဲတစေအိပ်ထဲထည့် ဆောင်ထားလို့ရမယ့် မရှိမဖြစ် Selfie Stick လေးပါနော်...
Mi Wireless 20W Charger Stand Fast Charger
Xiaomi ရဲ့ အသစ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Vertical stand Wireless Chargerလေးပါ။ 20W intelligent chargerလေးမို့အားဝင်မြန်ပါတယ်။ Xiaomi 9Pro အတွက်အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ 50မိနစ်အတွင်း ဖုန်းအား50%အထိရောက်အောင် support ပေးနိူင်တဲ့wireless chargerလေးပါ။ Xiaomi 9Pro,Xiaomi9တွေနဲ့သာမက အခြား Wireless support ရတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Wireless Chargingနဲ့အားသွင်းတဲ့အခါ ဖုန်းကိုဒေါင်းလိုက်၊အလျားလိုက် ပုံစံနှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အားသွင်းရင်းနဲ့ standအနေနဲ့ပါအသုံးနိုင်ပြီး Videoနဲ့ games တွေကိုဖွင့်ထားလို့ရပါသေးတယ်။ PC charging panelက ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေးမှု့ရှိလို့ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပိုမိုကြာရှည်ခံစေပါတယ်။အောက်ခြေကို non-slip silicon pad ကိုအသုံးပြုပေးထားလို့ မတော်တဆလဲကျမျိူးကိုလဲ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Mi 24inch A Monitor (XMMNT238CZ)
Mi A Monitor XMMNT238CZ သည် 23.8inch HD မျက်နှာပြင်နှင့် 1920x 1080P resolution ကိုအသုံးပြုပေးထားပါသည်။ micro-edge panel panel သုံးခုနှင့် 178 ဒီဂရီအကျယ်မြင်ကွင်းကျယ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပါးလွှာပြီး ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းကြောင့် အကြိုက်တွေ့စေပါသည်။ မျက်လုံးကိုထိခိုက်စေသော အပြာရောင်အလင်းတန်းကိုလဲလျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
Xiaomi ကထုတ်တဲ့ Vertical Air Cooled Wireless Charger (30W) လေးပါ။ 30W အထိ ရတယ်ဆိုတော့ သာမာန်ကြိုးနဲ့သွင်းတဲ့ဖုန်းအများစုထက်တောင် အားဝင်ပိုမြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းက support လုပ်တဲ့ wireless charging watt ပေါ်တော့ မူတည်တာပေါ့။Air cooling system ကြောင့်လည်း အားသွင်းတဲ့အချိန် ဖုန်းပူနေမှာ မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။ဘူးထဲမှာ USB-C ကြိုးရော Charging ခေါင်းရောပါရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် ဖုန်းတွေကိုင်ထားသူတွေကတော့ ဒါလေးကို မဖြစ်မနေသုံးသင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။
Mi 10W Car Wireless Charger
Mi 10W Car Wireless Charger သည် ကားထဲမှာ ဖုန်းအားသွင်းဖို့ ကြိုးတွေအများကြီးနဲ့ ရှုပ်နေတုန်းလားဗျ…Wireless အားသွင်းခွက် + Phone Holder ပစ္စည်းအသစ်လေးနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းက Wireless အားသွင်းစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့တော့လိုသဗျာ... Wireless အားသွင်းစနစ်ပါဝင်တဲ့ မိမိဖုန်းကို Phone Holder လေးပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ တောက်လျောက်အားသွင်းပေးနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်….
Mi TV E65S Pro 65 inch
Mi TV E65S Pro Tv သည် 65 inch ဖြစ်သောကြောင့် မြင်ကွင်းအလွန်ကောင်းမွန်သော TV လေးဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ဇာတ်ကားများ ကြည့်ရှုရာတွင်လည်း Resolution ကို လုံးဝ ကြည်ကြည်လင်လင် ပြတ်သားစွာဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Redmi K30 (8/256GB)
Redmi K30 4G တွင် 6.67" inch touchscreen မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး Resolution 1080x2400 pixels နှင့် aspect ratio 20:9ရှိသည်။ ၎င်းသည် octa-core Qualcomm Snapdragon 730G ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားသည်။၎င်းဖုန်းကို 8GB /256GB RAM ဖြင့်ထောက်ပံ့ထားပြီး 64GB / 128GB internal storage option များလဲရရှိနိုင်သည်။
Mi Air Dots 2SE
Air Dots 2SE ကတော့ bluetooth 5.0 ပါဝင်တဲ့အပြင် single တည်ငြိမ်ဖို့အတွက် နားကြပ် ၂ ဖက်လုံးကို transmit လုပ်ပါတယ်။ Battery life က ၅ နာရီအထိရတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက် tws နားကြပ်တစ်ခုအတွက် above average လောက်ပါပဲ။ Case မှာတော့ နာရီ 20 စာ battery life ထပ် ပါပါတယ်။ Type-C နဲ့အားပြန်သွင်းရမှာကအဆင်ပြေတယ်။ Wireless charging တော့မပါပါဘူး။Touch controls တွေအပြင် နားကြပ်ချွတ်လိုက်ရင် pause လုပ်ပေးပြီးပြန်တပ်လိုက်ရင် play ပြန် လုပ်ပေးတဲ့ wear detection ပါတာကတော့ဒီ price range မှာတော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။ MIUI သုံးထားတဲ့ MI ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် case နဲ့ နားကြပ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ battery life တွေကိုပြပေးနိုင်မယ်၊ ပြီးတော့ ပထမဆုံးအကြိမ် case အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ seamlessly paird လုပ်ပေးမယ့် function လဲရ မှာပါ။
Mi Air Dots 2S
Mi Air Dots 2S သည် Bluetooth version 5.0 ဖြစ်ပြီး Environmental Noise Cancellation လို့ခေါ်တဲ့ ဖုန်းပြောရင် ဆူညံသံလျော့ချပေးတဲ့ feature လဲပါပါတယ်။ Active noise cancellation တော့မပါပါဘူး။ ၁နာရီ အားသွင်းထားမယ်ဆိုရင် ၄နာရီလောက်အသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်
Redmi Air Dots S
Redmi Air Dots S လေးကတော့ယခင် Feature တွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။Bluetooth Version ကတော့ 5.0 ပဲ အသုံးပြုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ...ယခင် AirDots လို တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ချိတ်စရာမလိုတော့ပဲEarbuds တစ်ဖက်တပ်ထားရင် Mono-Mode နဲ့နှစ်ဖက်တပ်ထားရင်တော့ Stereo-Mode ဆိုပြီး ချက်ချင်းပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးဘဲ Triple Tap ပြုလုပ်ပြီးLow-latency Game Mode အသစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။Battery ကနေနဲ့ကတော့ (၄) နာရီဆက်တိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးCharging Case နဲ့ တွဲဖက်မယ်ဆိုရင်တော့ (၁၂) နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာIPX4 ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေပက်ဖြန်းမှုဒဏ် ခံနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။